राजिनामा दिएका बास्कोटालाइ पाँच वर्ष जेल सजाए हुने ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/राजिनामा दिएका बास्कोटालाइ पाँच वर्ष जेल सजाए हुने !
काठमाडौँ – सेक्युरेटी प्रेस खरिद प्रकरणमा एजेन्टसँग ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबार पदबाट राजीनामा दिए।
बास्कोटा र मिश्रबीच घुस लेनदेन भइनसकेको तर उद्योग(प्रयास) गरेको अवस्थामा देखिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको २१ अनुसार यस्तो अवस्थामा कसुर गर्दाको आधा मात्र सजाय हुने व्यवस्था छ।
यसअनुसार बास्कोटा र मिश्रलाई आठ देखि दश वर्षको आधा चारदेखि पाँच वर्ष कैद सजाय हुन सक्ने देखिन्छ। सञ्चार मन्त्रालयले फ्रान्ससँग प्रेस किन्ने निर्णय गरे पनि बिहीबार लेखा समितिले रोक्न निर्देशन दिएको छ। देश सञ्चार
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा आज एकैदिन १६ अन्तरराष्ट्रिय उडान
पहिरोमा बेपत्ता भएको ६ दिनसम्म नभेटेपछि काजकिरिया सुरु
समुदायस्तरमा नै देखिन थाल्यो नेपालमा कोरोना, घर बाहिर ननिस्किएका १९ महिने शिशुमा पनि देखियो कोरोना
पहिरोमा अभिभावक गुमा’एका आठ बालिकाको जिम्मा पूर्वमन्त्री बस्नेतले लिए